कर्मको परिचय — Study Buddhism
दैनिक जीवनको भाषामा चार आर्यसत्य
कर्म व्यवहारगत कार्य–कारणसँग सम्बन्धित छ
कर्मको व्याख्यासम्बन्धी विभिन्न पद्धतिहरू
उत्कण्ठाको मानसिक कारकतत्त्वका रूपमा कर्म
कार्मिक कृत्यको प्रभाव
खुसी र बेखुसी
कुशल र अकुशल कृत्य
नियतिवाद कि स्वतन्त्र छनौट
कर्मको स्रोतको रूपमा भ्रमपूर्ण दृष्टिकोण
भ्रमबाट मुक्ति पाउनु
यहाँ जलापामा पुनः आउन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। आजको साँझ मलाई कर्मको विषयमा बोल्न दिइएको छ। पक्कै पनि, बुद्धधर्म सम्बन्धी कुनै विषयको अध्ययन गर्नुअघि त्यो विषयको अध्ययन किन गर्न लागेका हौं, त्यो किन महत्त्वपूर्ण छ र बुद्धधर्मको सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्यमा त्यसको उपादेयता के छ भन्ने जान्नु जरुरी हुन्छ। बुद्धले दिनुभएको शिक्षा मूलतः सबै मानिसले सामान्यतया गर्ने अनुभूतिका सम्बन्धमा थियो, अर्थात् हामी जीवनमा के अनुभव गर्छौं, जीवनमा के भैरहेको छ जस्ता विषयमा उहाँको शिक्षा केन्द्रित थियो। हामीमध्ये प्रत्येकले जीवनमा अनुभव गर्ने सबैभन्दा मूलभूत कुरा के होला? त्यो के हो भने कुनैबेला हामी बेखुसी हुन्छौं, कुनैबेला खुसी। हामी सबैको जीवन भोगाई त्यस्तै हुन्छ, होइन त?
यसरी कुनैबेला हुने बेखुसी र कुनैबेला हुने खुसीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्यौं भने ती अवस्था अनेक समस्यासँग जोडिएको पाउनेछौं। बेखुसी भएको अवस्था दुःखसँग सम्बन्धित छ, यो त स्पष्टै छ। कोही पनि बेखुसी हुन चाहँदैन, होइन त? कुनै साथी हामीसँग विदा लिएर हिँड्दै गरेको देख्दा हामी बेखुसी हुन्छौं। कुनै अप्रिय कुरा वा अप्रिय ध्वनि सुन्दा बेखुसी हुन्छौं। त्यस्तै आफ्ना मनोभावसँग सम्बन्धित अनेक तर्कना मनमा चलेका कारण पनि हामी बेखुसी हुन्छौं। तर कहिलेकाहीँ हामी यसरी स्पष्ट देखिने कारणबिनै पनि बेखुसी हुन्छौं। त्यस्तो बेखुसीको भाव हामीले के देखिरहेका वा सुनिरहेका छौं, अथवा हाम्रो वरिपरिको परिस्थिति कस्तो छ, त्योसँग बिल्कुलै असम्बन्धित हुन सक्छ। यो चाहिँ फसादकै कुरा भयो, होइन त?
के खुसीको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हुन्छ? कहिलेकाहीँ हामी खुसी हुन्छौं, होइन त? कुनै कुरा देख्दा, सुन्दा, आफ्नो प्रिय व्यक्तिको बोली सुन्दा, कुनै व्यक्तिसँग बिताएका रमाइला पल या त्यस्तै अरू कुनै मनपर्ने कुरा सोच्दा हामीलाई खुसी लाग्छ। तर अलि गहिरोसँग हेर्ने हो भने यसरी हामीले गर्ने खुसीको अनुभवसँग पनि अनेक समस्या जोडिएको पाउनेछौं। प्रथमतः त्यो अवस्था कहिल्यै पनि टिकिरहँदैन। खुसी कतिञ्जेल टिक्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। फेरी यो कहिल्यै पर्याप्त हुँदैन। हामी कुनै खानेकुराको एक चम्चा मात्र खाँदा पनि खुसी हुन सक्छौं, तर त्यतिले कहिल्यै पनि पुग्दैन। हामीलाई त्यही खानेकुराको धेरैभन्दा धेरै मात्रा चाहिन्छ। यहाँ एक रमाइलो प्रश्न उठ्छ – कुनै कुरा कति मात्रामा खायो भने तपाईंलाई साँच्चिकै तृप्ति हुन्छ? यसबारे विचार गर्नुहोला। यसरी अनुभव हुने खुसीको अर्को पक्ष पनि छ, अथवा भनौं यसमा एक खोट छ। खुसी त भइयो, तर त्यसपछिको क्षणमा हामी के अनुभव गर्नेवाला छौं, त्यो थाहा हुँदैन। खुसीको अर्को क्षणमा हाम्रो खुसी कायम नै रहन सक्छ, वा बेखुसीले त्यसको ठाउँ लिन सक्छ। यो परिवर्तन हुन सक्छ, त्यसैले यस्तो खुसीमा कुनै सुरक्षाको अनुभूति हुँदैन।
खुसी र बेखुसीसम्बन्धमा यसरी गरिने विश्लेषण पटक्कै नौलो होइन र यो बुद्धधर्ममा मात्र बताइने कुरा पनि होइन। विश्वका धेरै महान् विचारकहरूले यस्तो विश्लेषण गरिसकेका र यससम्बन्धी शिक्षा दिइसकेका छन्। बुद्धले बोध गर्नुभएको र उपदेश दिनुभएको शिक्षा चाहिँ हाम्रो वास्तविक समस्या अर्थात् दुःखको गहिरो प्रकारसँग सम्बन्धित छ। उहाँले प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा खुसी र बेखुसीको उतार–चढाव भैरहने यथार्थलाई धेरै गहिरोसँग अध्ययन गर्नुभयो। खुसी र बेखुसीको अवस्थामा उतार–चढाव आइरहन्छ, आइ नै रहन्छ। उहाँलाई ज्ञान भयो कि जे कारणले यसो हुन्छ, त्यो वास्तवमा जीवनको हरेक क्षणमा हामीले गर्ने अनुभवको अंगको रूपमा रहेको हुन्छ। अर्को शब्दमा, हामी हरेक चीजलाई खुसी र बेखुसीको उतार–चढावका साथ जसरी अनुभव गर्छौं, त्यो सबैमा असन्तुष्टिको भाव अन्तर्निहित रहेको हुन्छ।
त्यो कुन कारण हो, जो प्रत्येक क्षण विद्यमान रहन्छ र हामीमा असन्तुष्टिको भावलाई निरन्तरता प्रदान गर्छ? बुद्धले यसको अन्वेषण गर्नुभयो र जान्नुभयो कि यथार्थबारेको भ्रम (मिथ्यादृष्टि) नै त्यो कारण हो। अर्को शब्दमा, हाम्रो अस्तित्वको आधार के हो, हाम्रो वरपरका प्रत्येक व्यक्तिको अस्तित्वको आधार के हो, संसारको अस्तित्वको आधार के हो भन्नेबारेको भ्रम नै त्यो कारण हो।
यो चाहिँ अन्य शिक्षकले बताउनेभन्दा बिल्कुल फरक कुरा हो। कसैकसैले भन्लान् – खुसी वा बेखुसीमा आउने उतार–चढावलाई मूलतः हामीले निश्चित नियमहरू पालना गरेका छौं कि छैनौं त्यो आधारमा हामीले पाउने पुरस्कार वा दण्डले निर्धारित गर्छ। त्यसैले धेरै शिक्षकहरूको भनाईमा हाम्रो खुसी वा बेखुसी मूलतः आज्ञापालनासँग सम्बन्धित छ। तर बुद्धले त्यसो भन्नुभएन। उहाँका अनुसार मूल कारण हाम्रो भ्रम या मिथ्यादृष्टि हो, कुनै आज्ञा पालन गर्यौं वा गरेनौं भन्ने होइन। यो भ्रम जीवनसँग सम्बन्धित छ। तर बुद्धले के पनि भन्नुभयो भने यो भ्रम हाम्रो जीवन र हाम्रा अनुभवहरूमा नभई नहुने, अभिन्न र अनिवार्य अंग होइन। यो नभए पनि काम चल्छ, यसलाई हटाउन सकिन्छ, यसलाई कहिल्यै नफर्किने गरी पूर्णरूपमा निर्मूल गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्ने खास उपाय भनेको हामीले आफ्नो भोगाईको तरीका वा प्रतिक्रियालाई बदल्ने हो।
आफूभित्रको भ्रम हटाउनुको अर्थ यो होइन कि हामी अरू कसैलाई आऊ, यहाँ आएर यो हटाइदेऊ भनी आग्रह गरौं। बरु हामी आफैं आफ्ना दृष्टिकोण र यथार्थबारेको धारणालाई बदल्ने काम गर्छौं। हामी मिथ्यादृष्टिलाई सही बोधले प्रतिस्थापित गर्छौं र त्यो बोधलाई सधैं कायम राख्छौं। हामी खुसी र बेखुसीको निरन्तर उतार–चढावको क्रमलाई थप बल दिने छैनौं। तब खुसी र बेखुसीको यो निरन्तरको उतार–चढाव रोकिनेछ। बुद्धको आधारभूत शिक्षालाई सामान्य भाषामा यसैगरी बुझ्नुपर्ला।
हामी कर्मको चर्चा गर्दैछौं। यसले हामीले खुसी र बेखुसीको अवस्थामा उतार–चढावको अनुभूति कसरी र किन गर्छौं भन्ने कुराको आधारभूत व्याख्या प्रदान गर्छ। कर्म त्यसैसँग सम्बन्धित छ। यसले कसरी हाम्रो भ्रमका कारण खुसी र बेखुसी वा प्रिय र अप्रिय अनुभूतिमा उतार–चढाव आउँछ भन्ने व्याख्या प्रदान गर्छ। यसले कार्य–कारणको सम्बन्धबारे चर्चा गर्छ, जुन अत्यन्त जटिल विषय हो। बुद्धले भन्नुभएको थियो – भाँडोमा पानी भर्दा पहिलो थोपा मात्रले भरिँदैन, अन्तिम थोपा मात्रैले पनि भरिँदैन। पानी भर्न सम्पूर्ण थोपाहरूको एकमुष्ट संग्रह चाहिन्छ। त्यस्तै जीवनमा अनुभव गर्ने कुरा पनि एउटा मात्र कारणले हुँदैन। हामीले तत्काल अगाडिको क्षणमा के गर्यौं वा युगौं अगाडि के गर्यौं, त्यो एउटै मात्र कुरा कारण बन्नका लागि पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि असंख्य हेतु र प्रत्ययहरूको जोड चाहिन्छ।
वैज्ञानिक दृष्टिले यो कुरा एकदमै तर्कसंगत छ। किनकि यहाँ भनिएको छ, कुनै पनि कुरा एउटै मात्र कारणले हुँदैन र हरेक कुरा एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्। एउटा सानो उदाहरण लिऊँ – कुनै जमानामा स्पेनबाट मानिसहरू अमेरिका नआएका भए आज हामी यहाँ एउटा कोठाभित्र बसेर यो चर्चा सुनिरहेका हुने थिएनौं। उनीहरू अमेरिका आउनु आज हामी यहाँ भेला हुनुपछाडिको एक कारक तत्त्व हो। यसैगरी हामी अहिले जे अनुभव गर्दैछौं वा अरू कुनै बेला जे अनुभव गर्छौं, त्यसका पछाडि अनेकौं प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कारणहरू हुन्छन्।
कर्मले ती कारणहरूबारे व्याख्या गर्छ जो विशेषगरी हाम्रो चित्तसँग सम्बन्धित छन्। तर हाम्रो अनुभूतिका पछाडि अनेकौं अन्य कारणहरू पनि जिम्मेवार हुन सक्छन्। मौसम आदि बाह्य भौतिक कारणहरू हुन सक्छन्। हामीलाई प्रभावित पार्ने कतिपय कुराहरू हाम्रो चित्तबाट नभई अरूको चित्तबाट उत्पन्न हुन्छन्। उदाहरणका लागि राजनैतिक नेताहरूले हामीलाई प्रभावित गर्ने अनेक नीतिहरू बनाउन सक्छन्, उनीहरूमा पनि अनेक भ्रमहरू हुनसक्छन्, होइन र?
कर्मले धार्मिक निष्ठाको चर्चा गर्दैन, यसले भाग्य वा नियति जस्ता कुराहरू गर्दैन। यसले त हामीलाई विभिन्न अनुभूति कसरी हुन्छ, र हाम्रा दृष्टिकोणले जीवनका ती अनुभूतिहरूलाई कुन प्रकारले प्रभावित गर्छन् भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्छ। कर्म शब्दको प्रयोग यहाँ सामान्य अर्थमा हरेक त्यस्तो चीजका लागि गरिन्छ जो व्यवहारगत कार्य–कारणसँग जोडिएको हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यसको प्रयोग हाम्रा व्यवहार र दृष्टिकोणबाट उत्पन्न हुने कार्य–कारणको सम्बन्धबारे व्याख्या गर्न गरिन्छ। “कर्म” ले सामान्यतया व्यवहारगत कार्य–कारणसम्बन्धी सम्पूर्ण विषयबारे बताउन सक्छ, अथवा त्यो सम्पूर्ण विषयको एक निश्चित पक्षलाई मात्र पनि सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यसैले यदि हामी कर्मको प्रक्रियालाई जान्न चाहन्छौं भने यसलाई अलि विस्तारमा र अलि सटीक ढंगले केलाउनुपर्ने हुन्छ।
बुद्धधर्ममा कुनै पनि कुराको सटीक ढंगले अन्वेषण गर्न शुरू गर्यौं भने हामी तिनको व्याख्यामा अनेकता पाउँछौं, अर्थात् एउटै प्रकारको मात्र व्याख्या पाउँदैनौं। पश्चिमी जगतका मानिसहरूलाई यो कुरा अलि असहज लाग्ला। तर हाम्रा सामु कुनै विषय छ वा हामी कुनै परिस्थितिमा छौं भने त्यसलाई आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा अनेक तरीकाले व्याख्या गर्न सक्छौं। पश्चिममा पनि त्यसै गरिन्छ। चीजहरूको व्याख्या सामाजिक दृष्टिले, मनोवैज्ञानिक दृष्टिले वा आर्थिक दृष्टिले गर्न सकिन्छ – यसमा कुनै आश्चर्यको कुरा भएन। यी अलग–अलग व्याख्याहरूले विषयलाई पूर्णताका साथ जान्न साँच्चिकै मद्दत गर्छन्। र, विषयको व्याख्या गर्ने यी हरेक तरीका कुनै न कुनै दर्शनशास्त्रीय विचार पद्धतिमा आधारित हुन्छन् – मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र वा त्यस्तै कुनै। बुद्धधर्ममा पनि यही गरिन्छ। यसभित्रका विभिन्न दर्शनशास्त्रीय विचार पद्धतिमा कर्मको सिद्धान्तले कसरी काम गर्छ भन्ने विवेचना विविध ढंगले गरिएको छ। पश्चिमी जगतमा पनि यस्तै हुन्छ – मनोविज्ञान आदि कुनै एक विधामा निश्चित विषयको व्याख्या फ्रायडवादी मनोविज्ञान वा युङ्गवादी मनोविज्ञानको दृष्टिले गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कुनै चीजको व्याख्या समाजवादी दृष्टिकोणले गर्न सकिन्छ, कुनैको पूँजीवादी दृष्टिकोणले। बुद्धधर्ममा पनि यही अभ्यास देखिन्छ। यी विभिन्न पद्धतिहरूका बारेमा जान्नु एकदमै उपयोगी हुन्छ, किनकि यसबाट हामीलाई कर्मको प्रक्रिया बुझ्ने विभिन्न दृष्टिकोणका बारेमा पूर्ण जानकारी प्राप्त हुन्छ। आजको चर्चाका लागि यी सबै पद्धतिहरूबीचको फरक विस्तारमा जानिरहनु आवश्यक छैन, तर यस्ता विभिन्न पद्धतिहरू छन् भनी जान्नु चाहिँ उपयोगी हुनेछ।
यसको निहितार्थ के हो भने हामी जे अनुभूति गर्छौं त्यसको व्याख्या गर्ने पश्चिमी पद्धतिहरू पनि हुन सक्छन्। ती पद्धतिहरूले कर्मसम्बन्धी हाम्रा सिद्धान्तहरूको खण्डन गर्नैपर्छ भन्ने जरुरी छैन।
एक पद्धतिअनुसार कर्मलाई यसको आफ्नै विशिष्ट स्वरूपमा विवेचना गर्ने हो भने यसले एक मानसिक तत्त्व (मेन्टल फ्याक्टर) तर्फ इंगित गर्छ। तर मानसिक तत्त्व भनेको के हो? मानसिक तत्त्व भनेको कुनै कुराको बोध गर्ने माध्यम हो। एक उदाहरण लिऊँ – हामीले कुनै व्यक्तिलाई देख्यौं र उतर्फ हिँडेर गयौं। यो एक क्रियामा अनेक मानसिक तत्त्वहरू संलग्न हुन्छन्। हामी उक्त व्यक्तिको संज्ञा कसरी गर्छौं भन्नेमा विविध पक्षहरू हुन्छन्। तीमध्ये कुनै पक्ष एकदमै सामान्य हुन्छन्, जस्तै उक्त व्यक्तिलाई अन्य कुनै व्यक्तिभन्दा फरक जान्ने, अथवा उ भित्ता होइन भनेर जान्ने। रुचि अर्को पक्ष हो – उक्त व्यक्तिको संज्ञा हुने क्रियासँगै यो पक्ष जोडिन्छ। त्यस्तै उक्त व्यक्तिप्रति हामीले ध्यान दिने र विभिन्न आवेग वा मनोभावको अनुभव गर्ने पक्षहरू पनि जोडिन्छन्। यी सबै मानसिक तत्त्वहरू हुन्, जो हामीले उक्त व्यक्तिलाई देख्ने र उतर्फ हिँडेर जाने क्षणमा सँगै जोडिएर आउँछन्।
तीमध्ये कुन चाहिँ मानसिक तत्त्व कर्म हो? कर्म त्यो तत्त्व हो जसले हामीलाई उक्त व्यक्तितर्फ तानेर लैजान्छ, यो त्यो उत्प्रेरणा हो जो हामीले उसलाई देख्नु र उतर्फ हिँडेर जानु सँगसँगै जोडिएर आउँछ। त्यसैले केही सैद्धान्तिक पद्धतिमा कर्मलाई करीब करीब भौतिक शक्तिकै रूपमा तुलना गरिन्छ। हुनत आशयलगायतका अन्य मानसिक तत्त्व पनि हुन्छन्। हामी उक्त व्यक्तिसँग के गर्ने आशय राख्दछौं? हाम्रो आशय उसलाई अंगालो हाल्ने पनि हुन सक्छ, उसलाई मुखमा मुक्का हान्ने पनि हुन सक्छ। अरू धेरै मानसिक तत्त्वहरू त्यहाँ जोडिएका हुन सक्छन्। तर कर्मले चाहिँ त्यो उत्कण्ठालाई जनाउँछ, जसबाट हामी उक्त व्यक्तिलाई देख्ने र उतर्फ हिँडेर जाने कामसँगै उसलाई अंगालो हाल्ने वा मुक्का हान्ने आदि जे कृत्य गर्छौं, त्यो कृत्य गराउँछ। ध्यान दिनुहोला, यस्तो उत्कण्ठा मानसिक स्तरमा हुन्छ, केवल अंगालो हाल्ने वा मुक्का हान्ने कामको भौतिक अभिव्यक्तिमा होइन। कुनै कुरा बोल्ने वा भौतिक रूपमा कुनै कृत्य गर्ने मात्र नभई मनले सोच्ने क्रियाका पछाडि पनि मानसिक उत्कण्ठाले काम गरिरहेको हुन्छ। चाहे हामी कुनै कुरा सोचौं, कुनै कुरा बोलौं, वा भौतिकस्तरमा कुनै कृत्य गरौं, ती सबैमा कुनै प्रकारको मानसिक उत्कण्ठा संलग्न हुन्छ।
विज्ञानमा जस्तै बुद्धधर्ममा पनि कार्य–कारण (कारण र परिणाम) को कोणबाट चीजहरूको व्याख्या गरिन्छ। त्यसैले कर्म – अर्थात् यो उत्कण्ठा – का वशमा परी हामी कुनै कृत्य गर्छौं, भन्छौं र सोच्छौं भने त्यसको कुनै न कुनै परिणाम हुनुपर्छ। कर्ममा हामीले गर्ने कृत्यको अरूमाथि हुने असरको चर्चा धेरै गरिँदैन, यद्यपि अरूमाथि पनि असर त हुन्छ नै। हामीले गर्ने कृत्यका कारण अरूमाथि के असर हुन्छ, त्यो धेरै हदसम्म उक्त व्यक्तिमाथि भर पर्छ। कुनै असर भौतिक स्तरमा मात्र हुन्छ, जस्तै तपाईंले कसैलाई हिर्काउनुभयो भने उसको छालामा घाउचोट लाग्नसक्छ। यो भौतिक कारण र परिणाम मात्र भयो। कर्ममा हामी यसको चर्चा गर्दैनौं। हामीले अरूलाई जे भन्छौं वा गर्छौं, त्यसको के असर उसको अनुभूतिमा पर्छ भन्ने कुरा उक्त व्यक्तिमै भर पर्छ। हामी कसैसँग एकदमै निर्दयतापूर्वक बोलौंला, जसबाट उसको भावनामा चोट पुग्ला र उसलाई असाध्यै दुःख लाग्ला। तर कोही मानिस त्यस्ता हुन्छन् जसलाई केही फरक पर्दैन। उनीहरू हामीलाई नै उल्लु भन्ठान्न सक्छन् र हामीले भनेको कुरा नपत्याउन वा हाम्रो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिन सक्छन्। कहिलेकाहीँ उनीहरू हामीले भनेको कुरा सुन्दै सुन्दैनन् वा सुनेपनि उल्टो बुझ्छन्। अथवा उनीहरूको दिमाग पहिल्यै अरू कुनै विषयमा अल्झिरहेको होला र हाम्रो कुरै नसुनेका होलान्। त्यसैले अरूलाई साँच्चिकै पीडा पुर्याउने हाम्रो खराब आशय रहेछ भने पनि त्यसले उनीहरूलाई चोट पुर्याउँछ नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। हुनत बुद्धधर्मले यसरी अरूलाई पीडा दिने प्रयास गर्नु कदापि भन्दैन। हामी केवल यो विषय कर्मको चर्चाभित्र पर्दैन मात्र भन्दैछौं।
कुनै चीजको कार्मिक परिणाम भन्नाले हामी त्यस्तो परिणाम बुझ्छौं जो यस्ता कार्मिक उत्कण्ठाको वशीभूत भै आवेगपूर्ण, बाध्यकारी ढंगले गर्ने व्यवहारको परिणामस्वरूप स्वयं हामीले भोग्नुपर्छ।
हामीभित्र यसको प्रभाव कस्तो पर्ला? एउटा प्रभाव त यो हुन्छ कि हामी आफूलाई एक विशिष्ट ढंगले सोच्न, बोल्न र आचरण गर्न अभ्यस्त बनाउँछौं। यो कुरा पश्चिमी विज्ञानको दृष्टिसँग धेरै हदसम्म मिल्छ। यसबाट त्यही खालको व्यवहार वा कृत्य बारम्बार दोहोर्याउने प्रवृत्ति विकसित हुन थाल्छ। त्यो कृत्यलाई दोहोर्याइरहने प्रवृत्तिको परिणामस्वरूप, र साथै उक्त कृत्यलाई दोहर्याइरहने बल जम्मा भएको परिणामस्वरूप हामीलाई त्यो कृत्य दोहोर्याइरहने इच्छा हुन्छ। यहाँ हामीले कृत्यलाई दोहोर्याइरहने प्रवृत्ति र त्यसका लागि जम्मा भएको बल भनेर भेद गर्यौं, त्यसको विस्तृत व्याख्यामा अहिले प्रवेश गर्दैनौं। तर ती दुवैले काम गर्छन्।
यो प्रवृत्ति वा बलको परिणाम के हुन्छ? यसले हामीभित्र एक भाव पैदा गर्छ। उदाहरणका लागि, यो भाव तपाईंसम्म पुग्ने र तपाईंलाई अंगालो हाल्ने हुनसक्छ, वा तपाईंसम्म पुग्ने र तपाईंलाई अप्रिय कुरा बताउने हुनसक्छ। जब हामीमा यस्तो भाव आउँछ, तब पक्कै पनि त्यो काम गर्ने वा नगर्ने दुवै विकल्प हाम्रासामु हुन्छ। यो थाहा पाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ – कि हामीमा जे काम गर्ने वा नगर्ने भाव आउँछ, त्यो भावलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विकल्प हामीसँग हुन्छ। यदि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लियौं, अथवा गर्छु वा गर्दिन भन्ने सोच्दै नसोची सीधै कार्यान्वयन गरिहाल्छौं भने ठीक त्यही क्षणमा, जतिबेला हामी त्यो कृत्य गर्छौं, कर्मले काम गर्न थाल्छ। कर्म त्यो उत्कण्ठा हो, त्यो हुटहुटी वा अनिवार्यता हो जसबाट हामी उक्त कृत्य गर्छौं।
यी प्रवृत्तिहरूका कारण अन्य धेरैथोक फलित हुन थाल्छन्। एक त हाम्रो अनुभूतिको “विषयवस्तु” हो। हुनत विषयवस्तु शब्दको दायरा अलि ठूलो हुन्छ, त्यसैले मलाई लाग्छ यसलाई थोरै साँघुर्याऊनु पर्ला। यहाँ यसको अभिप्राय कुनै निश्चित व्यक्तिलाई भेट्ने र अर्को निश्चित व्यक्तिलाई नभेट्नेसँग होला। वा अरू मानिसले हामीसँग कस्तो व्यवहार गर्छन्, त्योसँग होला। यो कुरामा स्पष्टता ल्याउन ज्यादै सावधानीेपूर्वक व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै व्यक्तिले हामीलाई तथानाम गाली गर्यो भने उसलाई त्यसो गर्न लगाउने हाम्रो कर्मले होइन। उसले आफ्नै प्रवृत्तिका कारण उसले अरूलाई तथानाम गाली गर्छ। तर जब उसले गरेको गालीलाई हामी अनुभूतिको स्तरमा ग्रहण गर्छौं, त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै कर्मले गर्दा हो।
यो कुरा बुझ्न पक्कै पनि त्यति सहज छैन। तर मलाई लाग्छ एक उदाहरणका माध्यमबाट हामी यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्न सक्छौं। कुनै शिशुलाई डाइपर लगाइएको छ र उसले त्यसमा फोहोर गर्यो भने उ त्यही फोहोरसँगै बस्नुपर्छ। अर्थात्, उसले आफूले गरेको फोहोरलाई झेलेर त्यसैसँग बस्नुपर्छ। कसैले त्यो शिशुको डाइपर फेरिदिन्छ कि नाईं, त्यो कुरा अहिले छाडिदिऊँ। यहाँ हाम्रो मतलब के हो भने तपाईं जुन फोहोर गर्नुहुन्छ, त्यसलाई झेलेर बस्नुपर्ने तपाईं आफूले नै हुन्छ। हामी जीवनमा फोहोर गरिरहन्छौं, जीवन चलिरहन्छ, र हाम्रो फोहोरको डङ्गुर बढ्दै जान्छ। यो यसरी नै चल्छ। अलि साँघुरो गरी यसलाई बुझौं – हामी अरूसँग कुनै निश्चित खालको व्यवहार गर्छौं भने अरूले पनि त्यस्तै खालको व्यवहार हामीप्रति गरेको अनुभूति गर्छौं। यहाँनेर याद गर्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने कर्मले तत्क्षण काम गरिहाल्दैन। कहिलेकाहीँ तपाईं कसैसँग ज्यादै स्नेहपूर्ण र शिष्ट लवजमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तर उक्त व्यक्तिको पारा त्यत्तिकै तात्छ र तपाईंसँग रिसले पड्किन्छ।
त्यसैकारण सही ढंगले कर्मको अर्थ बुझ्न पुनर्जन्मको विस्तारपूर्वक चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ। हामीले गर्ने कृत्यको परिणाम उत्पन्न हुन निकै लामो समय लाग्न सक्छ। यहाँसम्म कि तिनको परिणाम वर्तमान जीवनकालमा उत्पन्न नै नहुन पनि सक्छ। वस्तुतः अधिकांश कर्मको परिणाम त यो जीवनकालमा हुँदै हुँदैन। तर हामी पश्चिमी जगतका मानिसलाई यो कुरा स्वीकार्न त्यति सजिलो छैन। कसैकसैलाई बुद्धधर्मले कतै यसो त भन्दैछैन भन्ने लाग्न सक्छ – “यो जीवनकालमा राम्रो काम गर, अनि मृत्युपछाडि त्यसको फल तिमीले स्वर्गमा पाउनेछौ। तर नराम्रो काम गर्यौ भने मृत्युपछाडि त्यसको फल नर्कमा पाउनेछौ।”
यसलाई अलि गहिरोसँग बुझ्नु आवश्यक छ - के बुद्धधर्मले त्यसै भन्छ? वा यसले भन्ने कुरा बेग्लै हो? यो त्यति सरल विषय होइन। यो वास्तवमा एकदमै जटिल विषय हो। कार्मिक कारण र परिणाम (कार्य–कारण) लाई राम्रोसँग बुझ्न हामीले पुनर्जन्मलाई बुझ्नु पर्छ। त्यो पनि बुद्धधर्ममा बताएअनुसार पुनर्जन्मको अवधारणा जान्नुपर्छ, अन्य गैर–बौद्ध प्रणालीअनुसार होइन। कार्मिक कारण उत्पन्न गर्ने को हो, र त्यसको परिणाम (कार्य) को अनुभव गर्ने को हो? के यो त्यस्तो “म” भन्ने तत्त्व हो जसलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्न मिल्छ?
पुनर्जन्म के हो र कसको पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने विषयलाई अहिले एकातिर राखौं। मैले शुरुमै उल्लेख गरेँ कि बुद्धधर्म त्यस्तो प्रणाली होइन जहाँ कुनै व्यक्तिले आज्ञाहरू पालना गर्यो या गरेन भन्ने आधारमा उसलाई पुरस्कृत वा दण्डित गरियोस्। बुद्धधर्मले यो पनि भन्दैन कि जीवन एक परीक्षा हो जसको नतिजा हामीले अर्को जन्ममा पाउँछौं। यसले के मात्र भन्छ भने कुनै पनि कुराको परिणाम आउन निकै समय लाग्न सक्छ। यसलाई हामी पर्यावरणको उदाहरण लिएर बुझ्न सक्छौं। हामी कुनै निश्चित खालको व्यवहार गर्छौं, त्यसको केही परिणाम आफ्नो जीवनकालमा देख्छौं। तर त्योभन्दा धेरै बढी र भयंकर परिणाम भविष्यका पुस्ताहरूको जीवनकालमा देखिनेछ। कर्मको कुरा पनि त्यस्तै हो।
कर्मको विपाक (फल प्राप्त हुने) सम्बन्धमा एक पूर्णतः अलग आयाम छ। अर्को शब्दमा, कार्मिक कृत्यहरूको परिणाम उत्पन्न हुने एक अलग आयाम छ। यसको सम्बन्ध हामीले आजको चर्चाको शुरुवातमा उठाएको विषयसँग छ, अर्थात् खुसी र बेखुसीसँग छ। कुनै कृत्यलाई बारम्बार दोहोर्याइरहँदा केही निश्चित घटना हाम्रासाथ घटित भएको हामी अनुभव गर्न थाल्छौं। जस्तै, मानिसहरू हामीसँग निश्चित तरीकाले व्यवहार गर्न थाल्छन् अथवा पहाडको टुप्पाबाट ढुंगा खसेर हाम्रो टाउकोमाथि बज्रिन सक्छ। यी घटनाहरूलाई हामी खुसी र बेखुसीको सन्दर्भमा अनुभव गर्छौं। यसका बारेमा केही सोच्नुहोला। केही मानिस त्यस्ता हुन्छन् जो साङ्लालाई कुल्चिँदै हिँड्छन् र सोच्छन् – मैले यो घिनलाग्दो किरालाई सिध्याइदिएँ। उनीहरूलाई आफ्नो उक्त कृत्यमा मज्जा आउँछ। तर केही मानिस त्यस्ता हुन्छन्, जो झुक्किएर साङ्लालाई कुल्चिन पुगे भने पनि व्यथित हुन्छन्, उनीहरूलाई बडा नरमाइलो लाग्छ। केही मानिस अरूले आफूमाथि प्रहार गर्दा वा आफूलाई रिसले गाली गर्दा एकदमै दुःखी र व्यथित हुन्छन् भने केही मानिस त्यस्ता पनि हुन्छन् जसलाई त्यसमा खुसी लाग्छ। उनीहरू सोच्छन् – “ठीकै त हो नि। म पापी हुँ, बेकामे हुँ, एकदमै खराब हुँ, म यसै लायक छु कि मानिसहरूले मलाई गाली गरून्, हिर्काउन्।
मलाई एक कहावत याद आयो, तपाईंले सुन्नुभएकै होला। मलाई लाग्छ यो यहीँ मेक्सिकोबाट प्रचलनमा आएको हो; अथवा कसैले कल्पना गरेर सुनाएको र मैले पत्याएको हुन सक्छ। त्यहाँ भनिन्छ, “मलाई मेरो श्रीमानले कुट्छ भने त्यसको अर्थ हो उसले मलाई माया गर्छ। यदि कुट्दैन भने उसलाई मेरो वास्तै छैन।”
यसरी यो खुसी र बेखुसी बिल्कुलै भिन्न आयामका चीज हुन् जस्तो लाग्छ, होइन त? एक दृष्टिले हेर्दा हाम्रासामु जे आइलाग्छ, त्यो हामीले नै बाध्यतावश गर्ने हो, बारम्बार कुनै कृत्य दोहोर्याएका कारण त्यो हाम्रो आदत बनेको हो, र हामीले त्यसलाई त्यसरी नै अनुभव गर्ने बानी परेको हो। अर्को दृष्टिले हेर्दा हामी उक्त अनुभवलाई खुसीसाथ लिन्छौं वा दुःखका साथ लिन्छौं, त्यहाँ फरक पर्छ। यसरी हाम्रो अनुभूतिका यी दुई आयाम विगतमा हामीले नै गरेका अलग–अलग कार्मिक कृत्यहरूका कारण परिपक्व हुने हुन्। खुसी र बेखुसीलाई सामान्य ढंगले हेर्दा पाउँछौं कि त्यो एकदमै मामुली आयाम हो। त्यो त हामी कुशल (सकारात्मक) खालको कृत्य गर्छौं कि अकुशल (नकारात्मक) खालको, त्यसमा भर पर्छ। यदि अकुशल कृत्य गर्छौं भने परिणामस्वरूप बेखुसी हुन्छौं; र कुशल कृत्य गर्छौं भने परिणामस्वरूप खुसी हुन्छौं।
बुद्धधर्ममा केलाई कुशल (सकारात्मक वा सिर्जनात्मक) कृत्य भनिन्छ र केलाई अकुशल (नकारात्मक वा विनाशात्मक) भनिन्छ भन्ने कुरा एकदमै रोचक छ। यसका विभिन्न व्याख्या उपलब्ध छन्, जुन स्वाभाविकै हो। हामीले माथि चर्चा गर्यौं कि कुनै कृत्यको वास्तविक प्रकृति यसले अरू व्यक्तिमाथि कस्तो असर गर्छ भन्ने आधारमा बताउन सकिन्न, किनकि त्यसको असर के पर्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन। यसमा अन्य धेरै तत्त्वहरूले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। त्यसैले कुशल र अकुशलको निर्धारण त्यो कृत्य वा व्यवहार गर्दा चित्तको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुराले गर्छ। कुनै कृत्य लोभ, आसक्ति, रिस, वा बिल्कुल अबोधपनमा आधारित हुन्छ भने त्यो विनाशकारी हुन्छ, अर्थात् त्यो अकुशल हो। स्पष्टै छ, त्यसका विपरीत यदि कुनै कृत्य मैत्री, करुणा, उदारता आदि भावका साथ गरिन्छ भने त्यो सिर्जनात्मक अर्थात् कुशल हुन्छ।
कुनै कृत्यलाई कुशल वा अकुशल बनाउने अन्य धेरै तत्त्वहरू छन्, तिनको चर्चा एकदमै रोचक हुनसक्छ। एक तत्त्व त नैतिक वा सदाचारी आत्म–सम्मान हो। यसको सम्बन्ध हाम्रो आत्म–छवि र आत्म–गौरवसँग छ। हाम्रो आफूप्रतिको दृष्टिकोण सम्मानपूर्ण छैन भने आफ्नो व्यवहारको अरूमाथि के प्रभाव हुन्छ, त्यसको वास्ता गर्दैनौं। त्योबेला “आ, के मतलब” भन्ने खालको विचार आउँछ। त्यस्तो कमजोर आत्म–सम्मानका कारण हामी विनाशात्मक ढंगले काम गर्छौं। अर्कातर्फ, यदि ममा आफूप्रति सकारात्मक धारणा छ र आफूलाई एक व्यक्तिका रूपमा सम्मान गर्न सक्छु भने मूर्खतापूर्ण व्यवहार पक्कै पनि गर्दिन। म मूढ र क्रूर खालको काम गर्दिन, किनकि मलाई आफूलाई त्यसरी तल्लो स्तरमा गिराउनु छैन – म स्वयंलाई र आफूले गर्ने कृत्यलाई उच्च सम्मानका साथ लिन्छु। हामीमा नैतिक आत्म–गौरवको भाव छ कि छैन, त्यो चर्चा यहाँ आवश्यक छ। यो असाध्यै महत्वपूर्ण कारक तत्त्व हो जसले हामी कुशल खालको कृत्य गर्छौं कि अकुशल भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ।
अर्को निर्धारक तत्त्व हामीले गर्ने व्यवहारले अरूमाथि कस्तो छाप छोड्छ भन्ने ख्याल हो। हामी के कुरा बोल्छौं? मैले निकृष्ट व्यवहार गरेँ भने त्यसले मेरो परिवारमा के छाप छोड्छ? मेरो देशको छवि के हुन्छ? मैले निकृष्ट कार्य गरेँ भने मानिसहरूले मेक्सिकन जनताबारे कस्तो धारणा बनाउलान्? एक बौद्धमार्गी भएको हुँदा मैले बाहिर गएर टुन्न हुनेगरी रक्सी खाएँ वा कसैसँग मुक्कामुक्की गर्न थालेँ भने त्यसले बुद्धधर्म वा बौद्धमार्गीहरूको छवि के बनाउला? हामी आफ्नो परिवार, आफ्नो समुदाय, धर्म, राष्ट्र, शहर, आदि धेरै कुरालाई निकै सम्मान गर्छौं। त्यसैले आफ्नो व्यवहारको तिनमा के असर पर्छ, त्यसले उनीहरूमाथि कस्तो छाप छोड्छ जस्ता कुरालाई ख्यालमा राख्यौं भने विनाशात्मक काम गर्नबाट आफूलाई रोक्नेछौं। तर ती कुरालाई ख्यालमा राखेनौं भने विनाशात्मक काम गर्नेछौं। बुद्धधर्मलाई बुझ्ने यो एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण हो। यहाँ के कुरालाई निर्णायक तत्त्वका रूपमा लिइन्छ? आत्म–छवि, आत्म–गौरव, र आफ्नो समुदायप्रति सम्मानको भावलाई।
यसले हामीलाई आतंकवादको सामना गर्ने दिशामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूबारे ज्यादै गहन बोध प्रदान गर्छ। तपाईंले कुनै व्यक्ति र उसको समुदायलाई सबै प्रकारका आत्म–गौरवबाट वञ्चित गर्नुभयो, उनीहरूको जीवनलाई साँच्चिकै विकराल बनाइदिनुभयो, र तपाईं उनीहरूका बारेमा एकदमै नराम्रो सोच राख्नुहुन्छ भने उनीहरूमा मैले जे गरे पनि के मतलब भयो र भन्ने भाव पैदा हुन्छ। आफू र आफ्नो समुदायको आत्म–सम्मानको भावना शून्य भएपछि उनीहरूलाई लाग्न सक्छ – किन गएर विनाश नगरिदिने? आखिर मैले गुमाउनलाई केही त बाँकी छैन भन्ने भाव पैदा हुन्छ। मलाई लाग्छ, अरूसँगको व्यवहारमा, खासगरी संसारका समस्याहरूको समाधानका क्रममा यस ढंगले सोच्नु उपयोगी हुनेछ। कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको आत्म–गौरव वा आफ्नो समुदायको आत्म–सम्मानको भावबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ।
यी केही त्यस्ता मानसिक कारकतत्त्व हुन् जसले कुनै कृत्यलाई अकुशल वा कुशल बनाउँछन्। हामी अरू मानिससँग जस्तो व्यवहार गर्छौं, त्यसको उनीहरूमाथि त्यस्तै असर पर्छ भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। अर्थात्, हामीले अरूको ख्याल राख्नुपर्छ र अरूप्रति स्नेहको भाव राख्नुपर्छ। म यसलाई “स्नेहपूर्ण दृष्टिकोण” भन्छु। कहिलेकाहीँ हामी एकदमै बेवकुफीपूर्ण काम गर्छौं र सोच्छौं कि मैले तपाईंलाई जे भने पनि हुन्छ, यसले केही फरक पार्नेवाला छैन। म तपाईंको भावनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्न। यदि त्यसो हो भने हाम्रो मनमा स्नेहपूर्ण दृष्टिकोण नभएको ठहरिन्छ।
यसरी हामी लोभ, रिस, आत्म–सम्मानको अभाव, आफूले गर्ने व्यवहारले अरूमाथि के छाप छोड्छ भन्ने कुराप्रति बेवास्ता, स्नेहपूर्ण दृष्टिकोणको कमी, आफ्नो कामले अरूलाई र आफैंलाई कसरी असर गर्छ भन्ने कुराप्रति उदासीनता जस्ता मानसिक कारक तत्त्वहरूका साथ कुनै कृत्य गर्छौं भने त्यसको परिणाम के होला? पक्कै पनि, बेखुसी वा दुःख। र, यो दुःख अरू कसैले हामीलाई दिने दण्डसजाय होइन।
यस सम्बन्धमा साँच्चिकै गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ। के यस्तो अकुशल मानसिक तत्त्वहरूले भरिएको अवस्था खुसी चित्तको अवस्था होला? के यसले हामीभित्र साँच्चिकै खुसीको भाव प्रादुर्भाव गर्न सक्ला? या यसले दुःख मात्र सिर्जना गर्ला? यसबारे हामीजति गम्भीरतापूर्वक विचार गर्छौं, त्यति यो प्रष्ट हुन्छ कि चित्तको यस्तो नकारात्मक अवस्थाका कारण हामी दुःखको अनुभूति गर्छौं। त्यसका विपरीत यदि हामी लोभ, रिस आदि अकुशल तत्त्वबाट मुक्त चित्तको अवस्थामा छौं भने त्योबेला खुसीको अनुभूति गर्छौं। यसरी हामीले गर्ने व्यवहार दुई प्रकारका हुन्छन् – कुशल र अकुशल – जसका कारण नै हामीले खुसी वा दुःखको अनुभूति गर्ने हो।
यसका अतिरिक्त हामी कतिपय अन्य कार्य गर्छौं, जस्तै कसैमाथि रिसले कराउने, चिच्चाउने, कसैप्रति दयालु व्यवहार गर्ने आदि। यस्तो व्यवहारको प्रभावस्वरूप तिनैलाई दोहोर्याइरहने बानीको विकास हुन्छ, र त्यो अवस्थामा आफूलाई पुर्याउने प्रवृत्ति बन्छ जहाँ अरू मानिस पनि हामीसँग त्यस्तै खालको व्यवहार गर्छन्।
यस्तो कार्मिक कृत्यको अर्को परिणाम हाम्रो पुनर्जन्म कस्तो खालको हुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ, यद्यपि यसको विस्तृत चर्चा अहिले गर्दैनौं। आगामी जन्ममा हामी कस्तो योनिमा पुग्नेछौं, कुकुरको जस्तो सामान्य शरीर र चित्त लिएर जन्मिन्छौं वा साङ्लाको रूपमा जन्मिन्छौं, अथवा मानव शरीर नै पाउँछौं भन्ने कुरा यसमा भर पर्छ। आगामी जन्ममा हाम्रो शरीर र चित्त कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी आफूसँग घटित हुने परिघटनालाई कसरी ग्रहण गर्छौं र कुन प्रकारको कृत्य गर्छौं भन्नेसँग सम्बन्धित छ। यसको विवरण निकै विस्तृत छ, यो प्रारम्भिक व्याख्यानमा म केही सामान्य सिद्धान्तहरूको मात्र चर्चा गर्नेछु।
यसरी एकातर्फ हामी केही निश्चित प्रकारको व्यवहार बारम्बार दोहोरिरहने र निश्चित कुराहरू हाम्रासाथ घटित भैरहने अनुभूति गर्छौं भने अर्कोतर्फ यी सबैथोकलाई खुसी र बेखुसीको उतार–चढावका साथ अनुभव गर्छौं। यो कुरा कहिलेकाहीँ हाम्रो व्यवहार अनुकूल देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ बिल्कुलै अनुकूल देखिँदैन। यो उतार–चढाव चलिरहन्छ, हर क्षण चलिरहन्छ, र हामीलाई आउने क्षणमा के हुन्छ थाहापत्तो हुँदैन। हाम्रासाथ जे घटित हुन्छ, त्यो केवल हामी आफैंले मात्र वा आफ्नो कर्मले मात्र सिर्जना गरेको होइन। यो ब्रह्माण्डका अरू सबै प्राणीका साथ के घटित भैरहेको छ, उनीहरूको कर्म कस्तो छ, उनीहरू के गर्दैछन्, ब्रह्माण्डका अरू सबै तत्त्वहरूमा भौतिक स्तरमा के भैरहेको छ, मौसम, भूकम्प आदि यावत कुराहरूले यसलाई प्रभावित पारिरहेका हुन्छन्। यी सबै कारणले गर्दा अब आउने क्षणमा हामी के भोग्छौं भन्ने कुराको पूर्वानुमान गर्न कठिन छ। हामीलाई प्रभावित गर्ने यी सबै कारक तत्त्वहरू अति जटिल छन्। बुद्धले भन्नुभएको थियो – कुनै पनि व्यक्तिका लागि यो सबै जान्नु जटिलमध्येको सबैभन्दा जटिल काम हो।
यहाँनेर हामी स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। धेरै मानिसहरू प्रश्न गर्छन् – के कर्म भनेको नियतिवाद हो, या हामीमा स्वतन्त्र छनौटको सुविधा छ? यी दुवै सही होइनन्, दुवै अति हुन्। नियतिवादले भन्छ – अरू कसैले हाम्रा लागि सबैथोक पहिल्यै निर्धारण गरिदिएको छ, हामी के काम गर्छौं वा के अनुभूति गर्छौं भन्ने कुरा त्यसैका आधारमा हुन्छ। त्यो कुनै बाह्य तत्त्व, उपल्लो तत्त्व, वा अन्य केही हुन सक्छ। तर बुद्धधर्मले त्यसो भन्दैन। त्यस्तो कुनै बाह्य तत्त्व छैन जसले हामी के गर्छौं भन्ने कुरा पहिल्यै निर्धारण गरिदिएको होस्, र हामी केवल अरूले हाम्रा लागि लेखिदिएको पटकथालाई नाटकमा उतार्ने कठपुतली मात्र हौं।
अर्कातर्फ स्वतन्त्र छनौट भन्नाले कुनै रेस्टुराँमा गई हातमा मेन्युको किताब लिएर आफूलाई जे मन पर्छ त्यो छान्ने भनेजस्तो बुझिन्छ। तर जीवनमा सधैं त्यस्तो हुँदैन। जीवन त्यस्तै हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु बुद्धधर्मअनुसार बेठीक हो, त्यो भ्रमपूर्ण दृष्टि हो। हामीलाई यस्तो लाग्न सक्छ कि एउटा बेग्लै “म” भन्ने तत्त्व छ जो जीवनबाट अलग छ, अनुभूतिहरूबाट अलग छ, र जो यतिबेला हाम्रासाथ घटित हुने सबै कुराहरूबाट अलग बसेर रेष्टुराँको मेन्यु हेरेजस्तै जीवनलाई हेर्न र त्यहाँबाट आफ्ना लागि चाहिने चीजहरूको छनौट गर्नसक्छ। तर त्यस्तो कुनै “म” छैन जो जीवन र यसका अनुभूतिहरूबाट अलग होस्। र फेरी, हाम्रासाथ घटित हुने कुनै पनि कुराको अस्तित्त्व रेष्टुराँको मेन्युमा राखिएका चीजहरूजस्तो होइन जहाँबाट हामी आफूलाई मनपर्ने कुरा छान्न सकौं। ती चीजहरू पहिल्यै विद्यमान छन् र हामीले बटन दबाउनेबित्तिकै भेन्डिङ्ग मेसिनबाट फुत्त निस्केर हामीलाई प्राप्त हुन्छन् भन्ने सोच्नु गलत हो। मलाई लाग्छ यी उपमाको मद्दतले यस्तो सोच कति मूढतापूर्ण छ, बुझ्न सहयोग गर्छ। हाम्रा अनुभूतिहरू भेन्डिङ्ग मेसिनमा पहिल्यै सजाएर राखिएका चकलेटका बारजस्ता होइनन् जहाँबाट हामी आफूलाई मनपर्ने चकलेट छान्न सकौं, बटन थिचौं, पैसा तिरौं र मेसिनबाट फुत्त निस्किएको चकलेट लिएर जाऊँ। जीवन पक्कै पनि त्यस्तो हुँदैन, कि कसो? स्वतन्त्र छनौटले हाम्रासाथ के घटित हुन्छ र हामी के गर्छौं भन्ने कुरा इच्छाबमोजिम छान्न मिल्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। तर यथार्थमा हाम्रासाथ जे घटित हुन्छ, त्यो नियतिवाद र पूर्ण स्वतन्त्र छनौटका यी अतिवादी अवधारणाभन्दा बिल्कुल सूक्ष्म र जटिल हुन्छ।
व्याख्यानको प्रारम्भमा हामीले बुद्धधर्ममा के कुरा अरूभन्दा विशिष्ट छ भन्ने सन्दर्भमा केही उल्लेख गर्यौं। त्यो के भने बुद्धले हाम्रो खुसी र बेखुसीका अनुभूतिमा आउने नित्य उतार–चढाव, हाम्रासाथ भैरहेका तर हामीलाई मन नपर्ने र हाम्रो पटक्कै नियन्त्रण नरहेका अनेक अनुभूतिका सन्दर्भमा शिक्षा दिनुभएको थियो। यो समस्याको स्रोत भ्रमपूर्ण दृष्टिकोण (मिथ्यादृष्टि) हो, जो हाम्रो अनुभूतिको हरेक क्षणमा अन्योन्याश्रित रूपमा साथ रहन्छ र हाम्रो समस्यालाई थप बल प्रदान गर्छ। यो हामीसाथ रहने मात्र होइन, यसको वशमा परी हामीले गर्ने हरेक कृत्य – चाहे त्यो सकारात्मक होस् या नकारात्मक – ले यही मिथ्यादृष्टि र यसअन्तर्गत थप कृत्य गर्ने “नित्य आदत” लाई मात्र मजबुत बनाउँछ। त्यसैले हामी हरेक क्षण मिथ्यादृष्टि ग्रसित भएर गरिने कृत्यलाई जारी राख्छौं।
यो मिथ्यादृष्टि के हो? बुद्धधर्ममा यो एकदमै गहन विषय हो। सरल भाषामा भन्ने हो भने यो त्यस्तो भ्रम हो जो हामीले मेरोे, तपाईंको, र अरू सबैको अस्तित्वका सन्दर्भमा राखेका हुन्छौं। हामी आफूलाई यो ब्रह्माण्डको केन्द्र बिन्दु भन्ठान्छौं; र सोच्छौं कि म नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुँ, सधैंभरी मैले भनेजस्तो मात्र हुनुपर्छ, म सधैं ठीक छु, अरू मानिसले मेरा लागि सधैं समय छुट्याउनु पर्छ। मोबाइल फोनको उदाहरण लिएर यसलाई बुझौं – मलाई लाग्छ अरूलाई जुनसुकै बेला पनि मैले फोन गर्न मिल्छ र उनीहरू जे गरिरहेका भएपनि मैले त्यसमा बाधा पुर्याउन मिल्छ; उनीहरू मेरा लागि उपलब्ध हुनुपर्छ, किनकि म जे भन्न लागिरहेको छु त्यो उनीहरूले अहिले गर्दै गरेको कामभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ चाहे त्यो जेसुकै होस्। यो एक भ्रम हो, र यसका आधारमा हामी उप्रति विनाशात्मक ढंगले व्यवहार गर्छौं। हामी उसलाई रिसले कराउन, गाली गर्न सक्छौं, कठोरताको व्यवहार गर्न सक्छौं। हामी सोच्छौं, मैले त्यसो गर्नैपर्छ किनकि म जे चाहिरहेको छु, उ त्यो गर्दैछैन, अथवा म जे चाहिरहेको छुईंन, उ त्यो गर्दैछ। मलाई जे मनपर्छ, उसले त्यही गर्नुपर्छ किनकि मैले चाहेको कुरा निश्चय नै उसले चाहने कुराभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। यस्तै भ्रमका आधारमा हामी अर्को व्यक्तिप्रति राम्रो व्यवहार पनि गर्न सक्छौं, उप्रति दयालुपन प्रदर्शन गर्नेजस्ता काम गर्न सक्छौं, किनकि म चाहन्छु मसँग हुँदा उ खुसी होस्। त्यस्तै, मलाई आफ्नो उपयोगिता साबित गर्नुछ, त्यसैले अरूले के गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिन मन लाग्छ। र, म आफ्नी छोरीलाई सन्तान कसरी हुर्काउनुपर्छ, घरव्यवहार कसरी चलाउनुपर्छ भनेर सल्लाह दिइरहन्छु। छोरीलाई मेरो सल्लाह वा सहयोग चाहिएको छ कि छैन भन्ने म वास्ता गर्दिन, तर म आफूलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भन्ठान्छु, र मलाई आफ्नो उपयोगिता पनि साबित गर्नुछ। त्यसमाथि केटाकेटी कसरी हुर्काउने भन्ने ज्ञान छोरीलाई भन्दा मलाई नै बढी छ, त्यसैले उसले मेरो कुरा सुन्नैपर्छ।
त्यसैले यस्ता भ्रम छन्, जो सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै व्यवहारका कारकको रूपमा रहेका हुन्छन्। यही भ्रम वा मिथ्यादृष्टिका कारण हामी आफैं यो उतार–चढाव, उँच–नीचको चक्कर चलाइराख्छौं। त्यसैले यसबाट कसरी मुक्ति पाउने, त्यो जान्नु जरुरी हुन्छ।
जब हामी यी कार्मिक प्रवृत्ति र आदतहरू कसरी परिपक्व हुन्छन् भन्ने प्रक्रियाको विश्लेषण गर्छौं, विशेष गरी हाम्रा प्रवृत्तिहरू कसरी परिपक्व भएर फलित हुन्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छौं, तब यो देख्छौं कि यसको सम्बन्ध खुसी र बेखुसीको उतार–चढावप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोणसँग हुन्छ। हाम्रो खुसी र बेखुसीको अनुभूतिसँग जोडिएर आउने दुई महत्त्वपूर्ण मानसिक तत्त्वहरू छन्। पहिलो हो तिर्सना अथवा तृष्णा। हामी जब खुसीको अनुभूति गछौं, तब हामीमा तिर्सना हुन्छ – अर्थात् हामीमा एक अति प्रबल इच्छा हुन्छ कि यो खुसी हामीबाट नछुटोस्। मानिलिऊँ तपाईं कसैको साथमा आनन्द मानेर बसिरहनुभएको छ भने यस्तो तिर्सना हुन्छ – “मलाई छाडेर नजाऊ, मसँग सधैं सँगै बस। के तिमी अलि बेर बस्न सक्दैनौ?” अथवा हामी चकलेट केकको आनन्द लिइरहेका छौं र त्यसमा रमाइरहेका छौं भने त्यो खुसीबाट अलग हुन मन लाग्दैन। त्यसैले हामी चकलेट केक थपेको थप्यै, थपेको थप्यै गरिरहन्छौं, होइन त? यो नै तिर्सना हो। अर्कातिर बेखुसीको अनुभूति भैरहेको छ भने हामी त्यसबाट जतिसक्दो छिटो उम्किन चाहन्छौं। यी दुवैको गहिरो कारणको रूपमा हाम्रो दोश्रो मानसिक तत्त्व विद्यमान हुन्छ – त्यो हो “म” प्रतिको अति लगाव, एक त्यस्तो ठोस “म” जसले यो सबै अनुभूति गरिरहेको छ। मलाई यो खुसी प्राप्त गर्नु नै छ, चाहे त्यो चीज जेसुकै होस् जसका कारण म यो खुसी अनुभव गरिरहेको छु। मलाई यो चीज धेरैभन्दा धेरै चाहिन्छ, यसबाट मलाई अलग हुनुछैन। तर जे मलाई मन पर्दैन, त्यसबाट चाहिँ अलग हुनुछ। मलाई तिमीले भनेको कुरा मन परेन, त्यसैले तिमी चुप लाग, नत्र म तिमीलाई रिसले गाली गर्छु।
यसरी जब हामी आफ्नो जीवनमा खुसी र बेखुसीको उतार–चढावको अनुभव तिर्सना तथा ठोस “म” प्रतिको अति लगावका साथ गर्छौं (जो हाम्रो भ्रम वा मिथ्यादृष्टिका कारण उत्पन्न हुन्छ) तब यसबाट हाम्रा सबै कार्मिक प्रवृत्तिहरू परिपक्व हुने अवसर पाउँछन्। यसप्रकार हामी आफ्नो खुसी र बेखुसीको उतार–चढावलाई निरन्तर कायम राख्छौं, र आफ्ना पूर्ववत सबै व्यवहारलाई दोहोर्याई रहन्छौं, किनकि ती प्रवृत्तिको फल यही हुने हो। यसमा सबैभन्दा खराब त के छ भने खुसी र बेखुसीको प्रत्येक क्षणमा यो भ्रम विद्यमान रहन्छ। यसले फेरी त्यस्तै खुसी र बेखुसीका क्षणहरूलाई निरन्तरता दिन्छ, जहाँ फेरी पनि भ्रम विद्यमान रहन्छ। अहिले हामीले अनुभूति गर्ने भ्रमको कारक विगतको भ्रम हो, जतिबेला हामी त्यसैगरी खुसी वा बेखुसीको अनभुव गरिरहेका थियौं।
यो चक्र अनियन्त्रित रूपमा चलिरहन्छ, यसले स्वतः आफूलाई बारम्बार दोहोर्याइरहन्छ। बुद्धधर्ममा यसैलाई “संसार” भनिन्छ। यदि हामीले आफ्नो भ्रम या मिथ्यादृष्टिबाट मुक्ति पाउने हो भने यो कर्मको सम्पूर्ण प्रणाली नै भत्किन्छ र हामी संसारबाट मुक्त हुन्छौं। हामीले मिथ्यादृष्टिलाई सम्यग् दृष्टिले प्रतिस्थापित गर्न सक्यौं पाउनेछौं कि हामीले सोचेजस्तो ठोस “म” हुने र “मैले यो पाउनु छ, त्यो पाउनु छैन” भनेर तिर्सना जगाउने कुनै आधार नै रहनेछैन। यहाँ सम्यग् दृष्टिको विस्तृत व्याख्यामा म जान्न, तर तपाईंले सामान्य रूपमा यसलाई भ्रमलाई सही बोधले प्रतिस्थापित गर्ने भनेर बुझ्नु होला। तिर्सना नभएपछि त्यस्ता प्रवृत्ति र आदतहरूलाई सक्रिय बनाउने तत्त्व बाँकी रहँदैन। र, जब यी प्रवृत्ति र आदतहरूलाई सक्रिय बनाउने कुनै तत्त्व बाँकी रहँदैन, तब तपाईंले आफूलाई तिनबाट मुक्त पाउनु हुनेछ।
एक उदाहरण दिने प्रयास गर्छु। मानिलिऊँ तपाईंमा डाइनासोर हेर्ने प्रवृत्ति छ। जब ती डाइनासोर धरतीबाट लोप हुन्छन्, तब जंगलमा डुल्न जाँदा तिनलाई पुनः हेर्ने प्रवृत्ति तपाईंमा बाँकी रहँदैन, कि रहन्छ? त्यो प्रवृत्ति कुनैबेला थियो, जब म जंगलमा डुल्न जान्थें तब म सधैँ डाइनासोर हेर्थें। तर अब डाइनासोर नै छैनन्, त्यसैले तिनलाई हेर्ने प्रवृत्ति बाँकी छैन। यसै उदाहरणका मद्दतले बुझौं, हाम्रो प्रवृत्तिलाई सक्रिय गराउने कारक तत्त्व विद्यमान छैन – अर्थात् हाम्रा अगाडि डाइनासोर देखा पर्दैन, त्यसैले उसलाई हेर्ने हाम्रो प्रवृत्ति सक्रिय हुँदैन – भने हामीमा त्यो प्रवृत्ति पनि बाँकी रहँदैन। त्यस्तै हाम्रा कार्मिक प्रवृत्ति पनि थप परिपक्व हुन पाउँदैनन् किनकि अब प्रवृत्ति नै बाँकी छैनन्। त्यो अवस्थामा हामी खुसी र बेखुसीको उतार–चढावको थप अनुभूति गर्दैनौं, र त्योसँगै रहेको भ्रमलाई पनि थप अनुभव गर्न पाउँदैनौं, किनकि ती दुवै अब विद्यमान छैनन्।
यो सारा सांसारिक प्रपञ्चबाट मुक्त हुने तरीका यही हो। यसरी मुक्त हुँदा हामीले खुसी र बेखुसीको असन्तुष्टिपूर्ण तथा असुरक्षित उतार–चढावको अनुभूति गरिरहनु पर्दैन, बरू हामी एक बेग्लै प्रकारको खुसीको अनुभव गर्छौं, जो स्थिर र अलग्गै कोटिको हुन्छ। यो खुसी हामीले सामान्यता अनुभव गरेजस्तो भ्रममिश्रित खुसीजस्तो हुँदैन। “मैले खेल जितेँ, र यो हो मेरो इनाम” भनेजस्तो खुसी यो होइन। यो त्यस्तो खुसी हो जुन विषम परिस्थितिबाट मुक्त हुँदा प्राप्त हुन्छ। एउटा सामान्य उदाहरण दिने प्रयास गर्छु, यद्यपि यो ठ्याक्कै मिल्ने उदाहरण भने होइन – मानिलिऊँ तपाईंले दिनभर साँघुरो जुत्ता लगाइरहनुभएको छ, र साँझ त्यसलाई खोल्नुहुन्छ। त्यसरी खोल्दा जुन आनन्दपूर्ण मुक्तिको अनुभूति हुन्छ, हामीले भनेको खुसी त्यस्तै प्रकारको हो।
यसका अतिरिक्त यसरी मुक्तिको अवस्थामा पुग्दा हामीलाई यो कुराको पनि अनुभूति हुन्छ कि हाम्रा कृत्य अब कर्मका ती बाध्यकारी उत्कण्ठाहरूबाट निर्देशित छैनन् जसका कारण हामी एक निश्चित प्रकारको व्यवहार गर्थ्यौं र निश्चित प्रकारको नतिजा भोग्थ्यौं। हाम्रो लक्ष्य मुक्तिभन्दा पर्तिर बुद्धत्त्व प्राप्तिसम्मैको हो भने हाम्रा कृत्यलाई करुणाले निर्देशित गर्छ। करुणा भनेको अरू सबै जीव आफ्ना दुःखबाट र तिनका कारणबाट पनि मुक्त होऊन् भन्ने कामना हो।
कर्मसम्बन्धी केही सिद्धान्तहरूको सामान्य चर्चा मैले प्रस्तुत गरेँ। यो विषयलाई थप स्पष्ट पार्न बताउनुपर्ने कुराहरू अझै धेरै नै बाँकी छन्। तीमध्ये कति कुरा त सामान्य सिद्धान्तहरूको मद्दतले बताइन्छ, जस्तै – फलानो काम गर्यो भने त्यसको फलानो परिणाम हुनेछ, फलानो कारक तत्त्व विद्यमान छ भने त्यसको परिणाम कठोर हुन्छ, त्यो तत्त्व छैन भने र तपाईंले कुनै काम जानाजान नगरी अनायासै गर्नपुग्नुभयो भने परिणाम बेग्लै हुनेछ, आदि। यसको विवरण निकै धेरै छ।
यसका अतिरिक्त, अहिले यो क्षणमा हाम्रो कुन चाहिँ कर्मको विपाक हुन्छ (फलित हुन्छ) भन्ने कुरा सामान्य सिद्धान्तहरूको आधारमा बताउन कठिन छ किनकि त्यसलाई हाम्रा वरिपरि घटित भैरहेका अन्य यावत् कुराहरूले प्रभावित पारिरहेका हुन्छन्। अहिले हाम्रासाथ के घटित हुन्छ भन्ने कुरा पनि सामान्य सिद्धान्तका आधारमा भन्न सकिँदैन किनकि अहिले जे हुन्छ त्यसमा अरू सबैथोकको प्रभाव परिरहेको हुन्छ। मानिलिऊँ सडकमा तपाईंको कुनै दुर्घटना भयो, त्यसको जिम्मेवार कारण के होला? आफ्ना कर्मगतिको प्रभावमा परी सबैजना सडकमा त्यतिखेरै पुगेका हुन्छन्, सडकमा यातायातको अवस्था एकखालको हुन्छ, मौसम, सडकको आफ्नै अवस्था आदि यावत् कारणहरू विद्यमान हुन्छन्। त्यतिका धेरै कारणहरू मिलेर दुर्घटनालाई त्यो क्षणमा फलित गराएका हुन्छन्।
यो विषयमा तपाईंलाई रुचि छ भने यसका विविध पक्षको अध्ययनका लागि धेरै विस्तारमा जान सकिन्छ। कर्मका बारेमा हामीलाई जति धेरै ज्ञान भयो त्यति नै हामीलाई यसको नियन्त्रणबाट उम्किन सहयोग पुग्छ। यसबाट हामी आफ्ना लागि सांसारिक दुःखबाट मुक्ति (निर्वाण) प्राप्त गर्न सक्छौं, र साथै अरू सबैलाई सहयोग गर्न पनि ज्यादा सक्षम हुनेछौं।
तपाईंका कुनै प्रश्न छन्?
यो विषयमा अपराधबोधको कुनै चर्चा गरिँदैन? यहाँ अपराधबोधको कुनै ठाउँ छैन, कि छ?
सही हो। बुद्धधर्मको कर्ममा अपराधबोधको ठाउँ छैन। अपराधबोध एक प्रबल र ठोस “म” को भावमा आधारित हुन्छ, जहाँ म र मैले गर्ने कर्म दुई अलग अलग चीज हुन्छन्, मानिलिऊँ ती पिङ्–पङ् (टेबल–टेनिस) का दुई अलग अलग बल वा त्यस्तै केही हुन्। र अपराधबोधमा हामी यो मान्छौं कि यो “म” भन्ने चीज साह्रै खराब छ “मैले गरेको कर्म” पनि अति खराब छ। त्यसपछि ती दुई ठोसजस्ता लाग्ने वस्तुहरूलाई गलत हुन् भन्ने ठप्पा लगाउँछौं र तिनलाई पकडिरहन्छौं। त्यो नै अपराधबोध हो। मानिलिऊँ हामी आफ्नो घरबाट फोहोरको थुप्रो कहिल्यै फाल्दैनौं, घरभित्रै राखिराख्छौं, र सधैँभरी यो त असाध्यै खराब चीज हो, हेर कति गन्हाउँछ, कस्तो फोहोर छ भनिरहन्छौँ, अनि त्यही कुरालाई पकडेर बसिरहन्छौं। अपराधबोध त्यस्तै हो।
यो कुरा सुन्नमा अति स्पष्ट र तर्कसंगत छ। आफ्ना भ्रम, उत्कण्ठा, प्रवृत्तिहरू लगायतका चीजबाट कसरी मुक्त हुने, यो सबै प्रणालीलाई म बुझ्न सक्छु। तर यसरी बुझ्नु मात्र ती बाध्यतावश गरिने व्यवहार, तिनका अनुभव र प्रवृत्तिहरूबाट मुक्त हुनका लागि पर्याप्त छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ।
ठीक हो। त्यसैले हामीले प्रथमतः नैतिक आत्म–संयम (शील) को पालना गर्नुपर्छ। याद राख्नुहोस्, हामीले चर्चा गरेका थियौं कि “तिमीले आज लगाएको लुगा अति नराम्रो छ” भन्ने विचार आउनु र त्यो कुरा गएर कुनै व्यक्तिलाई भनिहाल्नुका बीच केही समयको दूरी (ग्याप) हुन्छ। यदि हामीले त्यो ग्यापलाई पकड्न सक्यौं भने तिमीले नराम्रो लुगा लगाएका छौ भनिदिँदा उसमाथि कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यो कुरा विचार गर्न पाउँछौं। त्यसरी भन्दा केही फाइदा हुने रहेनछ भने हामी उसलाई त्यो कुरा भन्दैनौं। त्यसैकारण हामीले नैतिक आत्म–संयम वा आत्मनिग्रहको अभ्यासबाट काम शुरु गर्नुपर्छ।
मलाई अहिले जे काम गर्न मन लागेको छ, त्यसमा मेरो मनोभाव कस्तो छ भनेर पनि जाँच गर्नुपर्छ। आफूले गर्न लागेको कृत्य लोभ वा त्यस्तै कुनै नकारात्मक आवेग (क्लेश) द्वारा निर्देशित त छैन? भनेर हामीले जाँच गर्नुपर्छ। के यो रिसमा आधारित त छैन? वा अबोधपनमा? के मलाई लाग्छ कि तपाईंले लगाएको लुगा एकदम वाहियात छ भनिदिँदा तपाईंमा त्यसको केही असर पर्दैन? अथवा मैले गर्न लागेको कृत्य स्नेह वा त्यस्तै कुनै सकारात्मक भावमा आधारित छ? यहाँनेर हामीले नकारात्मक आवेग (क्लेश) को परिभाषा जान्नु उपयोगी हुन्छ। यो चित्तको त्यस्तो अवस्था हो, जो सक्रिय भयो भने हामी अशान्त हुन्छौं र आत्म–संयम गुमाउँछौं।
आफू अशान्त भएको कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। त्यतिबेला हाम्रो मुटु छिटोछिटो चल्न थाल्छ, हामीलाई अलि असजिलो महसुस हुन्छ। त्यसैले हामीले सूक्ष्म कुराहरूप्रति सचेत रहने प्रयत्न गर्नुपर्छ। जस्तै, के म घमण्डपूर्वक त यसो भनिरहेको छुईंन? हुनसक्छ कुनैबेला कसैले केही कुरा बुझ्दैन र भन्छ, “ओहो, मैले त त्यो कुरा बुझिँन।” त्यतिबेला तपाईं “तर मैले त बुझेँ” भन्नुहुन्छ भने विचार गर्नुहोस्, के त्यहाँ तपाईंको दम्भ वा अहंकार त लुकेको छैन? त्यतिबेला तपाईंमा केही असहजताको महसुस हुन्छ। हामी यस्तै कुराप्रति सचेत रहनुपर्छ।
यद्यपि, यथार्थलाई जान्नु अति नै कठिन काम हो। यथार्थ भन्नाले शून्यताको बोध आदि पर्छन्। र यदि यस्तो बोध भैहाल्यो भने हामीले आफूलाई त्यसैमा अभ्यस्त बनाउनुपर्छ ताकि यो बोध सधैँ बनिरहोस्। त्यसैका लागि हामीले नैतिक आत्म–संयमको अभ्यासबाट काम शुरु गर्नुपर्छ, जसले हामीलाई नकारात्मक व्यवहार गर्नबाट बचाउँछ।
मैले बुझ्न अलि छुटाएँ जस्तो लाग्यो। तपाईंले खुसी र बेखुसीका अनुभूतिमा हुने उतार–चढावलाई निरन्तर बनाइराख्ने दुई मनोभाव हुन्छन् भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ। एक त तिर्सना भयो, अर्को के थियो?
म कार्मिक प्रवृत्तिहरूलाई सक्रिय गराउने दुई तत्त्वहरूको चर्चा गर्दै थिएँ। यो प्रतीत्यसमुत्पादको द्वादश निदानअन्तर्गत पर्छ। एक त तिर्सना हो, अर्कोलाई मैले अलि सरल ढंगबाट भनेको थिएँ। त्यो हो, “उपादान”। यसभित्र पाँच अलग–अलग प्रकारहरू पर्छन्। यसैले परिणामलाई पकड्ने हो। यसमा चिन्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको त्यस्तो ठोस “म” भाव हो जसले हाम्रा सबै अनुभव र घटित भैरहेका सबै चीजलाई भोग्ने काम गर्छ।
के यस्तो ठोस “म” लाई अन्य कुनै चीजको सन्दर्भमा जान्नुपर्छ? हामीमा भ्रम विद्यमान छन्, त्यसका बारेमा ध्यान दिनुपर्छ र त्यसबाट छुटकारा पाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो। तर हामी कुन विषयलाई लिएर भ्रमित भैरहेका छौं? हामी कुन कुरालाई अरूथोकै केही भनेर भ्रमित भैरहेका छौं?
यो सरल ढंगबाट उत्तर दिन मिल्नेखालको सजिलो प्रश्न होइन। हामी एक यथार्थ अस्तित्त्व भएको “म”, जुन सापेक्षिक सत्यअनुसारको “म” हो, लाई अस्तित्त्वमै नभएको “म” भन्ठानेर भ्रमित भैरहका छौं। अर्थात्, हामी यथार्थ “म” लाई अस्तित्त्व नै असम्भव भएको “म” भन्ठान्छौं। हामी त्यसमा अतिशयोक्ति गरिदिन्छौं, अर्थात् यथार्थमा नभएको कुरा थपथाप गरिदिन्छौं। उदाहरणका लागि मानौं म खुसी छु या म बेखुसी छु। यसको मतलब तपाईं बेखुसी हुनुहुन्छ भन्ने होइन, केवल म बेखुसी छु। यदि खुसी या बेखुसीको अनुभव विद्यमान छ भने त्यसलाई हामी म खुसी छु भनेर अभिव्यक्त गर्छौं, तपाईं खुसी हुनुहुन्छ वा अन्य कोही खुसी छ भनेर होइन। म खुसी छु, बस् त्यत्ति भन्छौं। यसरी सम्बोधन गरिएको “म” सापेक्षिक सत्यको म हो, जसको अस्तित्त्व हुन्छ।
यो सापेक्षिक सत्यको “म” लाई उदाहरण लिएर बुझ्न खोजौं। मानिलिऊँ, हामी कुनै चलचित्र हेर्दैछौं; त्यो चलचित्रको नाम “गन विथ द विन्ड” हो। यसमा एक पटक खुसीको दृश्य आउँछ, अनि बेखुसीको दृश्य आउँछ, र फेरी खुसीको दृश्य आउँछ। यो के भैरहेको होला? खुसीको त्यो दृश्य “गन विथ द विन्ड” चलचित्रमा छ, र बेखुसीको दृश्य पनि “गन विथ द विन्ड” चलचित्रमै छ। त्यहाँ भएका सबै खुसी र बेखुसीका दृश्यहरूको समग्रतालाई हामी सामान्य रूपमा “गन विथ द विन्ड” चलचित्र भनेर चिन्छौं। तर वास्तविकता के हो भने “गन विथ द विन्ड” केवल एक शीर्षक मात्र हो, एक नाम मात्र हो। तर जब हामी “गन विथ द विन्ड” को चर्चा गर्छौं, हामी शीर्षकको मात्र चर्चा गरिरहेका हुँदैनौं। हामी त्यो सिङ्गै चलचित्रको चर्चा गरिरहेका हुन्छौं जसलाई उक्त शीर्षकले संकेत गर्छ। त्यो सापेक्षिक अर्थात् सामान्य रूपमा हामीले जान्ने अस्तित्त्ववान चलचित्र हो; अर्थात् जसको अस्तित्त्व छ। त्यो चलचित्र त्यसका भिन्नाभिन्नै दृश्यहरूभन्दा अलग छैन। यदि त्यस्तो चलचित्र रहेछ जुन त्यसभित्रका दृश्यहरूभन्दा भिन्नै, अलग, स्वतन्त्र अस्तित्त्वको छ भने त्यो झूठ हुनेछ; अर्थात् त्यसको अस्तित्त्व हुनेछैन। जुन सापेक्षिक अस्तित्त्ववान चलचित्रको हामी कुरा गर्दैछौं, त्यसलाई त्यसका दृश्यहरूको समग्रताको आधारमा हामीले त्यो समग्र रूपमा चिन्ने हो।
त्यसैगरी हाम्रो जीवनमा खुसीका क्षणहरू हुन्छन् र बेखुसीका क्षणहरू पनि हुन्छन्। ती सबै क्षणहरूलाई हामी के भनेर सम्बोधन गर्छौं? त्यो सबैलाई हामी “म” भन्छौं। यो सापेक्षिक अर्थात् सामान्यतया बुझिने “म” हो, जुन अस्तित्त्ववान छ। यो “तपाईं” होइन, यो “म” हो। जसरी त्यो चलचित्र “गन विथ द विन्ड” हो, “स्टार वार्स” होइन। तर त्यस्तो “म” कतै छैन जुन यी खुसी र बेखुसी अनुभव हुने क्षणहरू र त्यसलाई अनुभव गर्नेभन्दा भिन्न होस्। यदि रहेछ भने त्यो झूठ हुनेछ, अर्थात्, त्यस्तो “म” को अस्तित्त्व हुनेछैन। फेरी, यो “म” भनेको त केवल एक शब्द मात्र हो, त्यसैले खासमा यो “म” भनेको जीवनका अनुभवहरूको सम्पूर्ण क्षणमा आधारित भई उक्त शब्दले जेलाई जनाउँछ, त्यही हो।
त्यसैले भ्रमित हुनु भनेको यस्तो ठान्नु हो – मेरो शरीरभित्र एक छुट्टै “म” भन्ने चीज छ, जो यहाँ बस्छ, जुन यो शरीरसँग कुनै तरीकाले जोडिएको छ, जसले सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने बटन दाब्छ, र अब यो “म” ले मेरो खुट्टामा भैरहेको पीडाको अनुभव गर्दैछ, र म धेरै दुःखी छु, मलाई यो मन पर्दैन। मानिलिऊँ कुनै त्यस्तो अलग्गै “म” छ, जो यो शरीर भनिने पराई चीजमा भैरहेका सारा अनुभवभन्दा भिन्न छ। यस्तो अलग्गै “म” – अर्थात् एक झूठ “म” – लाई हामी सापेक्षिक सत्यको “म” भन्ठानेर झुक्किन्छौं र तृष्णापूर्वक यस्तो भाव लिन्छौं – “मलाई यो दुःखबाट छुटकारा पाउनु छ, यो पीडाबाट छुटकारा पाउनु छ, भौतिक रूपमा भैरहेको यो पीडाका कारण भएको बेखुसीको अवस्थाबाट छुटकारा पाउनु छ।” पक्कै पनि, त्यस्तो ठोस “म” को भ्रम नभएको भए पनि हामी यत्तिकै बसेर पीडा भोगेर बसिरहने त थिएनौं। हाम्रो खुट्टा आगोमा परेको भए त्यसलाई बाहिर निकाल्ने नै थियौं। तर त्यतिबेला हामीले भन्ने “म” बेग्लै हुने थियो। त्यतिबेला छटपटी हुने थिएन।
यो भ्रमात्मक “म” र सापेक्षिक सत्यको “म” बीचको अवधारणागत भिन्नता निकै जटिल र विस्तृत छ। त्यसैले अहिले यसलाई यत्तिमै छाडौं। बरु यो साँझको चर्चालाई एक परिणामनाका साथ अन्त गरौं। यस्तो भाव लिऊँ – आजको चर्चाबाट जेजति बोध, जेजति सकारात्मक उर्जा प्राप्त भएको छ, त्यो अझै गहिरिएर जाओस्, अझ मजबुत होस्, र सबैको हितका लागि बोधि प्राप्तिमा हेतुको काम गरोस्।
मेक्सिकोको जलापामा सन् २००६ मेमा आयोजित सेमिनारबाट। नेपाली अनुवाद अरुण पौडेल।